फाँसीमा चढ्नुअघि रेहाने जब्बारीले भनिन्, ‘म भगवानको अदालतमा न्यायाधीशविरूद्ध मुद्दा हाल्नेछु’ – Satyapati
Loading... आजः ९ कार्तिक २०७७, आइतवार
फाँसीमा चढ्नुअघि रेहाने जब्बारीले भनिन्, ‘म भगवानको अदालतमा न्यायाधीशविरूद्ध मुद्दा हाल्नेछु’
१० असार २०७५, आइतवार
एजेन्सी । बलात्कार गर्न खोज्ने एक इरानी गुप्तचर अधिकारीलाई सन् २००९ मा छुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले इरानी इन्टरियर डिजाइनर २६ वर्षीया रेहाने जब्बारीलाई फाँसीको सजाय सुनायो । उनलाई शनिबार मृत्युदण्ड दिइएको छ । फाँसीको तख्तामा जानुअघि रेहानेले आफ्नी आमा सोलेहपक्राभनलाई लेखेको यो चिठी अहिले पनि विश्वमा चर्चित बनेको छ :
प्यारी ममतामयी आमा,
मैले कठोर दण्ड पाउने कुरा मैले आजै थाहा पाएँ । म आफ्नो जीवनरूपी किताबको अन्तिम पानामा आइपुगेकी छु भन्ने कुरा तपाईं स्वयंले मलाई नबताउँदा मेरो मन किञ्चित कुँडिएको छ । यो कुरा मैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने तपाईंले किन सोच्नुभएन ? यो सब कुराले तपाईंलाई भित्रैदेखि मर्माहत बनाएको छ भन्ने मलाई थाहा छ र यसले मलाई लज्जित तुल्याएको छ । तपाईंको र बुबाको हात एकपटक चुम्ने मौकाबाट मलाई किन वञ्चित राख्नुभयो आमा ?
यो संसारले मलाई १९ वर्षसम्म बाँच्ने मौका दियो । त्यो अपशकुन रातमै मेरो हत्या भएको भए कति वेश हुने थियो होला ? यदि मैले चिताएजस्तै भएको भए सहरको एउटा गल्लीमा मेरो लास फालिएको हुने थियो । मेरो लास पहिचान गराउन प्रहरीले तपाईंलाई त्यही गल्लीमा लिएर जान्थ्यो । त्यहाँ पुगेपछि तपाईंले थाहा पाउनुहुने थियो कि, तपाईंकी प्यारी छोरीको हत्या मात्र होइन, बलात्कार पनि भएको रहेछ ।
मेरो हत्या गर्नेहरूसँग जस्तै हामीसँग सम्पत्ति र सामथ्र्य दुवै छैन । त्यसैले मेरा हत्याराहरू कहिल्यै पक्राउ पर्ने थिएनन् । त्यसपछिका तपाईंका दिनहरू असिम पीडा र लज्जामा बित्ने थिए । यही पीडाले केही वर्षपछि तपाईंको प्राणपखेरु पनि उडाउने थियो । तर खै, कस्तो श्रापले गर्दा हो कुन्नि, कथा अप्रिय ढंगले पूरै बदलियो । मेरो शरीर कुनै गल्लीमा मिल्किएन । सहरको कुनै गल्लीमा मिल्काइनुको सट्टा मेरो शरीर इभिन जेलरूपी यो चिहानको सुनसान कालकोठरीमा मिल्काइएको छ ।
र, अहिले चिहानजस्तै साहर–ए–रे जेलमा मेरो शरीरलाई राखिएको छ । आमा, यो सबै नियतिको खेल हो भन्ने सम्झिएर चित्त बुझाउनुहोला, र कुनै प्रकारको दुस्ख–मनाउ नगर्नुहोला । मृत्यु जीवनको अन्त्य होइन भन्ने कुरा तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छँदै छ नि, हैन र ? तपाईंले मलाई भन्नुभएको थियो, मानिस यो संसारमा अनुभव बटुल्न र शिक्षा हासिल गर्न आउँछ । हरेक जन्ममा मानिसको काँधमा केही न केही जिम्मेवारी भिराइएको हुन्छ । यो जन्ममा मैले एउटा कुरा सिकें कुनै न कुनै वेला मानिसले पौँठेजोरी खेल्नुपर्दो रहेछ ।
मलाई मारपिट गर्ने व्यक्तिको विरोध गर्दा एक मानिसले ती व्यक्तिबाट मुखै–मुखमा, टाउकै–टाउकोमा चाबुक खानुर्पयो । उनीमाथि चाबुकको वर्षा भयो र यसैले गर्दा उनको प्राणपखेरु उड्यो । त्यसबखत तपाईंले मलाई भन्नुभएको थियो, छोरी, मर्नुपरे पनि मानिसले आफ्नो मूल्यको रक्षा गर्नुपर्छ । तर, तपाईंले हासिल गर्नुभएको अनुभवसिद्ध ज्ञान सत्य रहेनछ । जब ममाथि यो घटना घट्यो, तपाईंले मलाई दिनुभएको जीवनका मूल्यसम्बन्धी ज्ञान सबै बेकार साबित भए । तपाईंले भनेबमोजिम गर्दा मलाई नृशंस हत्यारा र निर्मम अपराधीका रूपमा अदालतमा उपस्थित गराइयो । त्यतिवेला मेरो आँसु खसेन । मैले कसैसँग जीवनरक्षाका निम्ति हात फिजाइनँ । मलाई कानुनप्रति विश्वास थियो । त्यसैले विरोधमा म केही बोलिनँ ।
म कस्तो कमलो मन भएकी छोरी हुँ भन्ने तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ । मैले कहिल्यै एउटा लामखुट्टे पनि मारिनँ । घरमा कुनै साङ्लो फेला र्पयो भने त्यसको जुँगामा समातेर म बाहिरतिर मिल्काइदिने गर्थेँ, मार्दिनथेँ । तर, आज मलाई नियोजित हत्यारा बनाइयो । जनावरप्रतिको मेरो व्यवहारलाई छोरोमान्छे जस्तो बन्न खोज्ने मेरो अभिलाषाका रूपमा अथ्र्याइयो । तर, यो घटना घट्दाखेरि मेरो हातका लामा, पालिस लगाएर चिटिक्क पारेका नङप्रति न्यायाधीश महोदयको ध्यानै गएन । न्यायाधीश महोदयबाट न्यायको अपेक्षा गर्नेहरू कति आशावादी हुँदा हुन् कठै ?
मेरो हात खेलाडीको जस्तो, अझ भन्नुपर्दा बक्सरको जस्तो जब्बर र खस्रो खालको छैन भन्ने तथ्यबारे न्यायाधीश महोदयबाट कुनै प्रश्न भएन । र, यो राष्ट्र, जसप्रति माया गर्नुपर्छ भन्ने भाव तपाईंले ममा जगाइदिनुभयो, यसले पनि मलाई कहिल्यै चाहेन । सोधपुछकर्ताको एकपछि अर्को प्रश्नको प्रहार सहन नसकेर मैले आँसु झारिरहँदा कोही पनि मेरो समर्थनमा आएनन् । मेरो सौन्दर्यको अन्तिम निशानीका रूपमा रहेको कपाल खौरिएपछि मेरो हातमा ११ दिन लामो कालकोठरीवासको उपहार थमाइयो ।
यो सबै सुनेर नरुनुहोला आमा । प्रहरी कार्यालयमा पुगेको पहिलो दिन नै एकजना अविवाहित प्रहरीले मैले पालेका लामा नङका निम्ति मलाई दिनु दुस्ख दिएका थिए । त्यसपछि मैले बुझेँ, यो युगमा सौन्दर्यताको पारख गरिँदैन रहेछ । सुन्दर हेराइ, सुन्दर विचार, सुन्दर कामना, सुन्दर हस्तलिखित अक्षर, सुन्दर आँखा, सुन्दर दृष्टिकोण र सुन्दर आवाजको यो युगमा कुनै कदर हुँदैन रहेछ । अहिले मेरो जीवनदर्शन बदलिएको छ । तर, यसका लागि तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्न । मेरा शब्दहरूको कुनै अन्त्य छैन । यी शब्दहरू मैले कसैलाई लेखेर दिएकी छु । जब तपाईंलाई उपस्थित नगराईकन र जानकारी नदिईकन मलाई फाँसी दिइन्छ, त्यतिवेला तपाईंले यो पत्र पाउनुहुनेछ । आफ्नो नासोका रूपमा मैले तपाईंका निम्ति हातले लेखेका यी अक्षरहरू छोडेर गएकी छु । मर्नुभन्दा अघि म तपाईंबाट केही चाहन्छु ।
मैले इच्छाएको कुरा पूरा गर्न तपाईंले दिलोज्यान लगाउनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो संसार, यो देशबाट र तपाईंबाट मैले चाहेको यो नै एक मात्र कुरा हो । बिन्ती, नरोईकन मैले भनेको सुन्नुहोस् । अदालत पुगेर मेरो तर्फबाट एउटा आग्रह गरिदिनुहोस् । किनकि, म जेलका यी चार पर्खालभित्रबाट त्यस्तो आग्रह गरिएको चिठी पठाउन सक्दिनँ । किनकि, हरेक चिठी जेलप्रमुखबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । जेलको यस्तो नियमले गर्दा तपाईंले मेरो कारण पुनस् एकपटक असिम मर्मान्तकारी क्षण बेहोर्नुपर्ने भएको छ । मैले खोजेको कुरा मेरा निम्ति मागिदिनुभयो भने म किञ्चित दुस्खी हुनेछैन । मलाई फाँसीबाट जोगाउने याचनाचाहिँ कहिल्यै नगर्नुहोस् भनेर मैले यसअघि नै तपाईंलाई पटक–पटक भनिसकेकी छु ।
रेहाने जब्बारीले फाँसीमा चढ्नुअघि अन्तिम पटक के भनिन्, हेर्नुस् भिडियो :
﻿ मैले आफ्नै जीवनभन्दा पनि बढी माया गरेकी मेरी प्यारी आमा,
म माटोमुनि पुरिएर कुहिन चाहन्नँ । म मेरा आँखा र मेरो स्वस्थ जवान मुटु माटोमा बिलीन होस् भन्ने चाहन्नँ । त्यसैले मेरा लागि एउटा भिख मागिदिनुहोस् । मलाई फाँसीको तख्तामा झुन्ड्याउनासाथ मेरो मुटु, मेरा मृगैला, मेरा आँखा, हड्डी र प्रत्यारोपण गर्न मिल्नेजति सबै अंगहरू मेरो शरीरबाट निकालियोस् र आवश्यक भएका व्यक्तिलाई ती अंग मेरो अन्तिम उपहारका रूपमा दिइयोस् । अंग पाउने व्यक्तिले मेरो नाम थाहा भने नपाओस् । उसले मेरा लागि पुष्पगुच्छा अर्पण गरोस् अथवा मेरा लागि खुदासँग प्रार्थना गरोस् भन्ने म चाहन्नँ ।
यो कुरा म अन्तरहृदयदेखि भनिरहेकी छु । मेरो कुनै चिहान बनोस् भन्ने चाहना पनि म राख्दिनँ, किनकि मेरो चिहानमा पुगेर निरन्तर शोक गर्ने र पीडा प्राप्त गर्ने अवसर तपाईंलाई प्राप्त भएको अवस्था म निम्त्याउन चाहन्नँ । मेरा लागि तपाईंले शोक जनाउने खालको कालो लुगा लगाउनुहोस् भन्ने पनि म चाहन्नँ । मेरा दुस्खका दिन बिर्सिने हरसम्भव चेष्टा गर्नुहोस् । मलाई यो पवनको जिम्मामा छोडिदिनुहोस्, ताकि यसले मलाई निर्वाध रूपमा उडाएर पर–पर अनन्तमा र्पुयाउन सकोस् ।
यो संसारले हामीलाई माया गरेन । मेरो भाग्यको मूल्यप्रति यो संसारले कुनै इच्छा देखाएन । अब म यी सबैबाट मुक्त भएर मृत्युलाई अँगाल्दै छु । तर, खुदाको अदालतमा फेरि मुद्दा चल्नेछ आमा । त्यहाँ म निरीक्षकविरुद्ध मुद्दा हाल्नेछु, न्यायाधीश महोदयविरुद्ध मुद्दा हाल्नेछु, यो देशका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैविरुद्ध मुद्दा हाल्नेछु । सृष्टिकर्ताको अदालतमा म ती सबैविरुद्ध मुद्दा हाल्नेछु, जसले अज्ञानता अथवा झुटको वशमा परेर देखिएको सत्य कहिलेकाहीँ वास्तविक सत्यभन्दा भिन्न पनि हुन सक्छ भन्ने तथ्यतर्फ निर्ममतापूर्वक आफ्ना आँखा चिम्लिए ।
कोमल हृदय भएकी प्यारी आमा,
परलोकमा आरोप लगाउनेहरूको आसनमा हामी हुनेछौँ र आरोपित व्यक्ति उभिने कठघरामा अरूहरू हुनेछन् । हेरौँ, भगवान् के चाहँदा रहेछन् । म तपाईंलाई नमरुञ्जेलसम्म अँगालोमा कसिरहन चाहन्छु ।
तपाईंलाई माया गर्ने रेहाने
१ अप्रिल २०१४
गण्डकी प्रदेशमा थप ४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
दसै बिदा मनाउन घर पुगेका सैनिक जवानको करेन्ट लागेर मृत्यु
दरबारमार्गबाट कस्तुरीको बिनासहित दुई पक्राउ
भोलि मध्यरातबाट विदेशी टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू हुने, अटेर गरे प्रसारण बन्द
कोरोनाका कारण लमहीका एक पुरुषको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा मृत्यु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच दिन कोरोनाको प्रेस बिफ्रिङ नगर्ने
कोरोनाले धरानका थप दुईको मृत्यु
थप २ हजार ८५६ जनामा कोरोना, अझै ४५ हजार ५७२ जना सक्रिय सङ्क्रमित
यसपालिको दशैंमा यसरी लगाऔँ टीका
दशैँमा ‘सख्या’ नाचले थारू गाँउमा उल्लास
पर्यटकका लागि सात महिनापछि खुल्यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
दशैंमा यात्रु नपाएपछि वायुसेवा कम्पनी निराश, ‘जहाज खाली, भाडामा प्रतिस्पर्धा’
प्रधानमन्त्रीले ‘रअ’का प्रमुख गोयलसँग भेट्नु कुटनीतिक मर्यादा विपरित : प्रवक्ता श्रेष्ठ
बञ्चराले हानेर छोराद्वारा आमाको हत्या
पूर्वमन्त्री शर्मालाई कोरोना संक्रमण
वरिष्ठ भारतीय पत्रकारले भने, ‘कालापानी नेपालकै हिस्सा’ (अडियोसहित)